Trump: Khatar aan horay loo arag baa soo food saartay Maraykanka - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaTrump: Khatar aan horay loo arag baa soo food saartay Maraykanka
Trump: Khatar aan horay loo arag baa soo food saartay Maraykanka
Madacweynaha Maraykanka Donald Trump, ayaa sheegay in Maraykanka ay soo wajahday “khatar aan horay loo arag” ayadoo uu isa soo tarayo cadaadiska uga imaanaya dhanka xisbiga dimuquraadiga ah oo wada baadhitaan lagu doonayo in xilka looga tuuro.
Muuqaal uu ku faafiyey bartiisa twitter-ka, ayaa Trump wuxuu ku sheegay in xisbiga Dimuquraadigu ay u soo dhigteen “xurriyadiisa asaasiga” ah, asagoo tilmaamay in sababta ay u bartilmaameedsanayaan ay tahay in uu u halgamayo dadka Maraykanka ah.
Trump ayaa lagu tuhunsan yahay in dhiggiisa Ukraine, Volodymyr Zelinsky uu cadaadis ku saaray in uu baadhitaan ku sameeyo ninka la filayo in uu kula tartamo doorashada madaxtinimada ee la yiraahdo Joe Biden.
Madaxda guddiyada saddexda ah ee Golaha Wakiillada ayaa amar ku siiyey Xooghayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo in uu soo gudbiyo qoraallada xidhiidhka la leh kiiskaan.
Xutiyiinta: Saddex guuto oo ciidamada Sacuudiga ayaan nolosha ku qabanay
Suuriya oo digniin u dirtay Maraykanka iyo Turkiga